Real Madrid oo Bale ka iibineeyso Manchester United waliba qiimo jaban. Hazard oo ka badalaayo shaqada 'Madrid.
Friday, October 19th, 2018 - 14:32:01
Monday November 13, 2017 - 13:54:51 in Wararka by Ak Caqil
Kooxda Real Madrid ayaa go’aansatay inay iska iibisaa Gareth Bale xagaaga dambe kadib markii ay lumisay sabarkii ay u heeysay xiddiga reer Wales. Laacibkaan uu daashaday dhaawaca badan ayaa la sheegayaa in la fasixi doono xagaagani taas waxaan xaqiijisay shabakada AS kadib markii uu xiddigaan gaaray dhaawac cusub xilli uu soo kabasho ku jiray tiiyoo ay jirto inuusan soo muuqan tan iyo bishii September ee sanadkaan waxaana ay Kooxda dooneeysaa inay iska iibisaa xiddiga ugu qaalisan Kooxda boqortooyda Madrid.
Manchester United ayaa la sheegayaa inay tahay Kooxda ugu horeeyso ee xiiseeyneeyso xiddiga Wales waxaana ay gaareen xagaagi tagay qiimo lacageed oo lagu qiyaasay of €120 milyan oo euro balse hada waxaa la sheegayaa in qiimahaas uu hoos u dhici doono. Real Madrid ayaa la sheegayaa hadii uu Bale tagaa ay isku dayi doonto inay la soo wareegaan xiddig cusub oo Galatico ah.
Bale haduu tagaa waxaa macquul ah in uu Zidane la soo wareegaa Eden Hazard oo ah xiddig aad loola xiriirinaayo Kooxda Madrid muddo fog iyo Goolhayaasha Atletico Madrid, Manchester United iyo Chelsea midkood la keeno Kooxda.